Ndi ogha n’udo nwere ike gbaa oku | Akụkọ akụrụngwa
Nsogbu kachasị anyị na-ahụ mgbe ngwaọrụ gbawara na-abụkarị nsogbu batrị na 90% nke ikpe. Liquids n'ime batrị e keghị ha ka ha zukọta na mgbe ha mere, ha na-ebute mgbawa, anwụrụ ọkụ ma ọ bụ tinye ya ọkụ.
N'ezie, n'ime usoro nlanarị nke ndị nke ọwa DTT ahụ, ha tinyere dịka ọmụmaatụ gbanye egwuregwu batrị nke ngwaọrụ. Ndị na-atụgharị egwu aghọwo ihe ntụrụndụ kachasị dị n'etiti ụdị mmadụ niile na ndị na-eche echiche n'azụ ha na-agbakwunye atụmatụ ọhụrụ iji mee ka arịrịọ ha dịkwuo elu.
Akụkọ WBRC FOX6 - Birmingham, AL
Nke ahụ bụ mgbe nsogbu na-abịa. N'ahịa anyị nwere ike ịchọta spinners na-arụ ọrụ na Bluetooth, iji nwee ike ịkpọ egwu site na ama anyị mgbe anyị na-atụgharị n'okwu ahụ. Enweghị asịsa. Odi mma, ee. Nke a bụ ahịhịa ikpeazụ, ọ bụrụ na ịge egwu na ekwentị mkpanaaka na-abaghị uru maka ndị gbara anyị gburugburu, ị listeninga ntị na ya site na igwe ntụgharị ga-abụ ihe kacha sie ike, ọbụghị naanị maka etu esi enye anyị, site na ihe ọjọọ ruo na egwu, kamakwa ụdị spinners a malitere ịmalite ọkụ, ọzọ n'ihi batrị ahụ.
Iji belata akwụ ụgwọ ka kacha, ndị okike nke ụfọdụ spinners na Bluetooth na-ege ntị music, ha na-eji batrị dị oke mmad na ha na-ebute udiri nsogbu ndia, nke oburu na anyi ejichi ya n’oge nwere ike ibute oke egwu. Na United States, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ a apụtaworị mgbe ọ na-akwụ ụgwọ. Nke a na-echetara m Hoverboards, ndị eletriki abụọ-wheeled ngwaọrụ na obere ihe karịrị otu afọ gara aga, ọkụ ọkụ obere oge mgbe wepụ ha na igbe ahụ, na-amanye Amazon iwepu ngwaọrụ ndị a niile na ụlọ ahịa ya n'ịntanetị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ndị spinners nwere obi ụtọ na-enwukwa ọkụ